Taksibe Ivato –Zotra filamatra Mbola misy manao hadalana ihany
Na dia efa nataon’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT ho zotra filamatra modelin’ireo taksibe eto an-drenivohitra aza ny zotra D, mampitohy an’i Vassacos amin’Ivato dia mbola misy ihany ireo manao ny ataony.
Tsy mitondra ireo mpandeha mamonjy fodiana eny Andohatapenaka sy ny manodidina ny ankamaroan’izy ireo rehefa harivariva manomboka amin’ny 04 ora iny fa avy hatrany dia mamaky mihazo ny lalam-baovao rehefa avy manala olona etsy amin’ny tobim-piantsonana Andohatapenaka ary mivoaka avy hatrany eny 67 ha. Noho ny fitohanana lavareny eny amin’ny digy mivoakan’Andohatapenaka iny no nambaran’ireo mpamily sy ny mpanampy azy fa anton’izany raha tsy misy intsony kosa ny fanariana mpandeha eny Andranomena sy ny fihodinana an-dalana toy ny teo aloha. Mbola misy amin’ireo mpandeha ihany no mijaly koa mangataka fanaraha-maso avy amin’ireo tompon’andraikitra. Tsiahivina moa fa efa ahitana ireo peta-drindrina manome toerana ny vehivavy bevohoka sy ny olona manana fahasembanana ao anatin’ireo taksiben’Ivato rehetra. Efa misy ihany koa ny laharam-pinday hahafahana miantso ireo tompon’andraikitra raha sanatria misy zavatra tsy mety hataon’ireo mpamily sy ny mpanampy azy.